10 Izindawo ezihamba phambili ze-Snorkeling EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ukuhambela i-Iceland > 10 Izindawo ezihamba phambili ze-Snorkeling EYurophu
Ama-Orchins oLwandle, ulwandle, izilwane ezinemibala egqamile, namanye amanzi acace bha emhlabeni, snorkeling kulezi 10 izindawo ziyi-adventure ekhanga ingqondo. Lezi 10 izindawo ezihamba phambili ze-snorkeling eYurophu, ube nokubonakala okumangazayo ku- 20 m. ngaphansi kwamanzi, futhi ziyikhaya lezinye zezinto eziphila olwandle ezithakazelisa kakhulu emhlabeni.
1. Indawo Engcono Kakhulu Yesikebhe Sokushushuluza E-UK: Devon
Ukusuka esiqhingini esinamadwala kuya eLondon Bridge, enyakatho yeTor Bay, lapha uzothola enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthwebula izinyoni e-UK. Ama-Jewel anemones afanayo apinki okhanyayo nephuzi, izimbaza, nezinhlanzi eziyingqayizivele ze-tompot blennies, ungachitha usuku lonke u-snorkeling eLondon Bridge.
Izivakashi eziningi eziya e-UK naseDevon kungenzeka zingazi nokuthi zihambela enye yezindawo ezihamba phambili zokuthwebula i-snorkeling eYurophu. Nokho, IDevon iyindawo emnandi yokubhukuda ngesikebhe nokutshuza e-UK. Ngaphezu kweLondon Bridge, ILundy Island ingelinye igugu le-snorkeling, ngezimpawu zezimpunga, inyanga jellyfish, namahlengethwa ukubona.
2. Indawo Engcono Kakhulu Yesikebhe Sokushushuluza ePortugal: UBerlenga Omkhulu
IPortugal idume ngamabhishi ayo amahle, Isiqhingi saseBerlenga Grande asinjalo. Vele 10 km ukusuka ePeniche, okukodwa kwe 10 izindawo ezimangalisa kakhulu zokuntweza e-Europe, IBerlenga iyisiqhingi esihle. Siqukethe 3 iziqhingi ezincane zemihume, amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka amnyama, nokuphahlazeka komkhumbi.
Uma ngabe ubuzibuza, ungakuthokozela ukuphuka komkhumbi ngamagiya okushushuluza. Ngaphezu kwalokho, umhlaba omangalisayo wase-Atlantic ongaphansi kwamanzi wezidalwa zasolwandle njenge-sunfish, amakhorali, uzokulinda ngaphezu kwesifihla-buso. IFort San Juan Bautista yasendulo ebheke le ndawo enhle izobe isemehlweni akho njengoba uza, engeza imfihlakalo kukho konke okwenzekayo.
3. IPort Cros National Park, France
Kufike ekujuleni kwe- 8 m. emzileni okhethekile we-snorkel, ungahle uthande amakhulu ezinhlanzi ePort Cros esiqiwini. Le marina endala isiqiwu semvelo ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuthwebula i-snorkeling eYurophu. I-Plage de la Palud yindawo ekahle yokuqala i-adventure yakho ye-snorkeling.
Ngokuphikisana nezinye izindawo ezimangalisayo zokuthwebula izinyoni kulolu hlu, lapha uzothola 6 ama-buoy afundisayo anamaqiniso athakazelisayo ngezidalwa zasolwandle ohlangana nazo: Ukugoqwa kwepigogo lase-East Atlantic, isigwedli esipendiwe, iziqoqwana ezingavamile zedusky, nezinye izinhlanzi eziningi ezimibalabala.
Omunye izindawo ezihamba phambili zokudilika emhlabeni, ngokusobala iLa Silfra iyindawo ebabazekayo yokuthwebula i-snorkeling eYurophu. Ukubhukuda phakathi 2 Amazwekazi aseYurophu, nomndeni, noma abangane, emanzini ancibilika eqhweni laseLangjokull, kuyinto engasoze yalitshalwa.
ISilfra ingenye yezindawo ezihamba phambili ze-snorkeling emhlabeni, ngenxa yokubonakala okumangazayo ku- 100 m. Imibala ingaphansi kwamanzi, ukubhukuda phakathi kwezindledlana ezinamadwala namajika, futhi yonke le nkazimulo iyihora elilodwa ukusuka eReykjavik. Njengoba amanzi ethanda ukubanda kakhulu, kufanele ubhukhe uhambo lokuhamba ngesikebhe, nge-swimsuit efanele kanye negiya lokukugcina ufudumele.
5. Isiqhingi Esibomvu, Sardinia, Italy
Sula amanzi acwebile kuyadingeka ukuze ube nokuhlangenwe nakho okumangalisayo kwe-snorkeling. U-Isola Rossa eSardinia unezimo ezinhle kakhulu zokuzijabulisa nge-snorkeling: amanzi acwebile, indawo enamadwala nemihume, impilo yasolwandle ezoshaya ingqondo yakho, namabhishi anesihlabathi esimhlophe ukubamba umoya wakho, phakathi kwama-snorkeling sessions.
Uzothola isigodi sabadobi abancane, U-Isola Rossa eNyakatho-Ntshonalanga Sardinia. Amakhorali, inhlanzi, futhi amadwala abomvu ayindawo efanelekile yeholide lasehlobo. Ngaphezu kokugeza ilanga, ungajabulela ezemidlalo yamanzi, ukuntweza emanzini, nokuvunguza komoya ogwini lwase-Italy. Ngakho, qiniseka ukupakisha izikhwama ezingangeni manzi, nekhamera engaphansi kwamanzi yokukhumbula umhlaba ongaphansi kwamanzi weSardinia.
6. ICabrera Archipelago National Park, Spain
19 iziqhingi ezincane zihlanganisa iziqhingi zaseCabrera, ikhaya lezinto eziphilayo zasolwandle ezimangalisayo, engathintwanga ngabantu. Umhume oluhlaza okwesibhakabhaka, indawo yokulondolozwa kwemvelo yasolwandle ingenye yezindawo ezicebe kakhulu eYurophu, nasohambweni lwakho lokuhamba ngesikebhe, uzothola ngaphezu kwe- 500 izinhlobo. Scorpionfish, izingwane, izimfudu ze-leatherback, ezinye zezidalwa zasolwandle ozohlangana nazo.
Ngaphezu kwalokho, ungathola ithuba elimangalisayo lokubona amahlengethwa avela esikebheni, usendleleni eya eCabrera. Ugu lwaseSpain lungenye yezindawo zasehlobo ezithandwa kakhulu eYurophu, futhi iMallorca yindawo ephuphayo yolwandle yabahambi abavela kuwo wonke umhlaba. Ngakho, pakisha isudi yakho yokubhukuda neye-snorkel, ngohambo olungenakulibaleka futhi luphumule eCabrera.
7. I-Walchensee Lake Munich
Kakhulu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, futhi kujulile, Lake IWalchensee iyi-Alpine Lake enhle kakhulu eJalimane. 75 KM kusuka eMunich, le ndawo yokuthwebula i-snorkeling itholakala ku- maphakathi nesifunda saseBavaria. Ngakho, njengoba uza emoyeni uphumule, le ukubukwa okuhle okukuzungezile nikezela ngesimo esithule kakhulu sesipiliyoni saphezulu.
Ngokubonakala okuhle ku-5m kuye ku-20m, Lake I-Walchensee ingenye ye- 10 izindawo ezihamba phambili ze-snorkeling eYurophu. Ngaphezu kwalokho, ungahlola ngokujulile nangaphezulu kwama-trout we-rainbow nama-eels, echibini lamanzi acwebile, njengoba uhamba udilika eLake Walchensee.
8. River Snorkeling In Austria: I-Viecht Am Traunfall
Ngenkathi iningi labantu likutshela ukushushuluza ngesikebhe oLwandle iMedithera kuyinto emangalisayo, emfuleni snorkeling kuyinto engavamile. Amanzi amasha aluhlaza aluhlaza, phezulu e-Austria, IViecht am Traunfall yindawo engcono kakhulu yokwenza i-snorkeling e-Austria. IViecht am Traunfall river inamakhorali amahle, nasohambweni lwakho lokuya kulobu buhle, uzomenyelwa ekuzulazuleni ngamatshe nasekuhleleni.
Ngakho-ke, ukushushuluza ngesikebhe e-Austrian Alps kungenye yezinto ezithokozisa kakhulu ukubhukuda ngesikebhe eYurophu. Uma usuqedile uhambo lwakho lokuhamba ngesikebhe, amagquma aluhlaza nokubukwa kwemifula yi ipikinikini ephelele nendawo yokuphumula. Lapha, ungabuyekeza izibhamu ezimangalisayo ezingaphansi kwamanzi ozitholile, futhi ujabulele umoya omusha wezintaba e-Austrian Landscape.
9. IMede Islands Spain
Iziqhingi zaseMede ziyingxenye yesiqiwu esihle semvelo i-del Montgri. Kutholakala endaweni yokugcina yasehlobo yaseSpain, ICosta Brava, amaMede ayikhaya lezinto eziphilayo zasolwandle ezibabazekayo. Uma ukhangwa impilo yasolwandle, bese ushayela ngesikebhe lapha, ngeke kulibaleke.
Iziqhingana eziyisikhombisa zamaMede, ogwini lwaseCatalonia, ezungezwe uLwandle lwaseMedithera olubandayo kukhona ipharadesi lokuthwebula izinyoni. Empeleni, i-snorkeling eMede ingenye yezinto eziphezulu okufanele uzenze ngenkathi useholidini eCosta Brava. Nge izingane, abangane, noma uwedwa, amaMede ayikhaya lezilwane ezinhle, ulwandle, izinkanyezi zasolwandle, namabharacuda.
10. Izindawo ezihamba phambili ze-Snorkeling EYurophu: Elba Italy
Ama-gorgoni abomvu ngakolunye uhlangothi, amakhorali abomvu namnyama ngakolunye uhlangothi lolwandle, I-Elba yipharadesi. Itheku laseSant Andrea esiqhingini sase-Elba yilapho uqala khona noma yikuphi ukuzidela kwamanzi. Kude netheku nokuhambela phambili, impilo yasolwandle kulesi siqhingi saseTuscan iyamangalisa.
Ngaphezu kwamakhorali amahle, inhlanzi, nezilwane, ugu lwase-Italy lungelinye lamazwe ahamba phambili emhlabeni. Ngakho, uma udinga ukuthola umoya wakho phakathi komhume ohlola nokusesha i-sunfish, khona-ke ugu luka-Elba olunesihlabathi luyindawo ephelele yokuphumula.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo olungasoze lwalibaleka emhlabeni omangalisayo kakhulu ongaphansi kwamanzi kulezi 10 izindawo ezihamba phambili ze-snorkeling eYurophu ngesitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu elithi “1o Izindawo Ezinhle Kakhulu Ze-Snorkeling EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)